यौन अनुभूति – Page3– JanaSanchar.com
अमेरिकाको टेक्सासस्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने ९ वर्षकी बालिकाले आफ्नो आइप्याडमा पोर्न फिल्म सर्च गरेर हेरेको कुरा शिक्षकले फेला पारे । यति सानो उमेरमा बालिकाले पोर्न हेरेको देख्दा शिक्षक आश्चर्यचकित भए । उनले पोर्न फिल्म हेर्नुको कारणबारे बालिकालाई सोधे । जब ती बालिकाले आफुले पोर्न फिल्म किन हेरेको ? भन्ने कुराको जवाफ दिइन् तब..
यौनकर्मी भन्छन्, ‘पुलिससँग त पूरै सेटिङ हुन्छ’
काठमाडौँ – रातको ८ बजेको थियो । एउटा रङ्गीन रात्री जीवनको सुरुवात । खुलमखुल्ला फष्टाएको यौन बजार र ग्राहक खोज्न हिंडेका यौनकर्मी । थरि थरिका रेट, थरी-थरीका यौनकर्मी । थोरै महिला, अधिकांस तेश्रो लिंगी । ड्राइभरदेखि मजदुरी काम गर्नेहरुको यौन प्यास मेटाउने भोक । सबैका आ-आफ्नै धुन । यहि क्रममा हामी पनि बुझ्न लाग्यौ यौनकर्मीका यथार्थ । र हामी..
परपुरुषसंगको पहिलो रात
मयमनसिंहमा प्राइभेट कोठा नपाइए पनि ढाकामा पाइन्छ भनेर रुद्र भनिरहन्थ्यो । तर, म कसरी ढाका जान सक्थेँ र रेलमा चढेर एक्लै जान त सक्थेँ होला, तर घरबाट अनुुमति देलान् र अन्त्यमा सान्दाइ मयमनसिंह आएका वेला ढाका जान जिद्दी गरेँ । ‘पहिलो वर्षको जाँच पास गरेको प्रमाणपत्र लिन ढाका जान्छु,’ भनेँ । ढाका पुग्नेबित्तिकै ‘एकजना साथीलाई ढाका..
कामिरिता २१औं पटक सगरमाथा शिखरमा
काठमाडौं- संसारभरका पर्वतारोही र हिमाल आरोहणमा चासो राख्नेका लागि खुसीको खबर छ– एक नेपाली आरोहीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा २१ औं पटक विजयी झन्डा फहर्‍याएका छन्। सोलुखुम्बु थामे गाउँका ४७ वर्षीय कामिरिता शेर्पाले शनिबार २१ औं पटक सगरमाथा शिखर चुमेका हुन्। उनको यो २१ औं सफल आरोहण विश्वभरका आरोहीका लागि उत्साह र प्रेरणामात्र नभई नयाँ..
बलिउड अभिनेत्री ट्विङ्कल खन्नामाथि यौन दुर्व्यवहार
अक्षय कुमारकी पत्नी ट्विङ्कल खन्नाले आफु यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको बताएकी छिन्। एक भारतीय पत्रिकामा एक लेख लेख्दै उनले यस्तो बताइएकी हुन । कामको सिलसिलामा एक धनी क्लाइन्टले मोबाइलमा अश्लील म्यासेज गरेको उनले पत्रिकामा लेखेकी छिन्। ‘मिसेज फनीबोन्स’ र ‘द लिजेन्ड अफ लक्ष्मीप्रसाद’ जस्ता किताब लेखिसकेकी खन्नाले पत्रिकामा थप लेखेकी..
कर्मचारीलाई एक घण्टा सेक्स गर्ने छुट्टी !
दुनियामा अनौठा व्यवस्थाहरु देखिन्छन् । स्वीडेनमा हालै एउटा कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिउसो एक घण्टा छुट्टी दिईने छ ताकि उनीहरुले घरमा गएर आफ्ना पार्टनरसगँ सेक्स गर्न सकुन् । त्यति मात्र हैन यो ब्रेकको समयको पैसा पनि सरकारले दिने छ । यदी यो कानुन स्वीकृत भएमा स्वीडेनमा प्रेमी प्रेमीका र श्रीमान श्रीमतिले राम्रो..
पहिलोपटक सेक्सको मज्जा
कुरा आज भन्दा ७-८ बर्ष अगाडीको हो , म कामको सिलसिलामा ईलाम गएको थिए । आफ्नो सबै काम सकेर म ईलामबाट बिराटनगर फर्कन बस स्टेण्ड पुगे र विर्तामोड सम्मको टिकट लिए । १० मिनेट जति पर्खे पछि बस पनि आईपुग्यो र सबैजना आ-आफ्नो सिटमा गएर बस्यौ । मेरो छेउको सिट खाली थियो । म आनन्दले बसे र मोबाईल निकालेर गीत सुन्न थाले । गाडी बिस्तारै आफ्नो बाटो लाग्न शुरु..
मेरो भिनाजुसँग पहिलो एक रात
आषाढको एक शुक्रबारको साँझ बिश्वविद्यालयबाट घरतिर फर्कने क्रममा अलि ढिला भो । घरसम्म पुग्नलाई माइक्रो, अनि नगर बस सबैको आवातजावत बन्द भैसेकेको थियो । हिडेर एक घण्टाको पैदल यात्रा गर्ने दुस्साहस मैले गरिनँ । त्यसकारण, ट्याक्सीको पखाईमा त्यसै उभिरहेको थिएँ । आडैमा एउटी युवती आई । मतिर पुलुक्क हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराई । मैले पनि..